Fizarana vatomamy sy kilalao ho famalifaliana ny ankizy
Tontosa ny asabotsy, 20 desambra, tolakandro lasa, ny fety nandraisana ireo ankizy, mba ho famalifaliana azy ireo amin’izao ankatoka noely zao. Hetsy efa fanaon’ny Radio Voanio isan-taona izy io ary betsaka tamin’izany ireo ankizy sy Ray amandReny efa niandry azy io tamin’ity taona ity.
Betsaka ny ankizy tonga tamin’izany ankoatran’ireo izay nisoratra anarana mialoha taty amin’ny Radio Voanio. Niferana ho ankizy 40 no niraisina tamin’izany raha toa ka 30 no nivinavinaina tamin’ny fanomanana ny fety sy kilalao ho an’ny ankizy.
Ankizy avy amin’ny toerana maro samihafa, toa ny avy any Mangarano, Ambolomadinika, Depot, Tanambao, Valpinson, Morarano; ary sokajy kilasy samihafa, izay teo anelanelan-taona 4 ka hatramin’ny 8 taona izy ireo.
Hafaliana arak’izany ho an’ny Ray amandRenin’ireo ankizy satria hafapo tanteraka ny ankizy tamin’ny kilalao izay niarahana tamin’ny ekipan’ny Radio Voanio, ary tsy vitan’izany fa mbola samy nahazo kilalao izay nifanaraka tamin’ny sokajin-taonany avy.
(88) Lantomalala S. : 23-12-2014 - 12:30